Learning English – စာအုပ်မြို့တော်
၁။lady = မိန်းမပျို finger = လက်ချောင်း ladyfinger = ရုံးပတီသီး…။ ၂။Chair = ကုလားထိုင်။ Man =လူ၊ ယောက်ျားကြီး။ Chairman = ဥက္ကဌ ၃။nut = အခွံမာသီး။ house =အိမ်။ nut-house = အရူးထောင်။ ၄။cow = နွားမ။ Pea = ပဲလုံး။ cow-pea = ပဲလွမ်း။ ၅။water = ရေ cress = စမုန်နီ၊ စမုန်။ Water cress = ကန်ဇွန်းရွက် ၆။Man = လူ go […]
Posted in: Learning EnglishLeaveacommentMM Book City	 06/06/2018
” Basic Level English လေ့လာကြည့်ကြရအောင် “
1. Are you ready? အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ 2. Are you sick? မင်း နေမကောင်းဘူးလား။ 3. Are you sure? မင်းသေချာလား။ 4. Are you waiting for someone? တစ်ယောက်ယောက်ကို စောင့်နေတာလား။ 5. Am I pronouncing it correctly? အသံထွက်မှန်သလား။ 6. Anything else? တခြားရှိသေးလား။ 7. Are they the same? သူတို့ အတူတူပဲလား။ 8. Are you afraid? မင်း ကြောက်သလား။ 9. Are you allergic to anything? တစ်ခုခုဆို […]
Posted in: Learning EnglishLeaveacommentMM Book City	 22/05/2018
Don’t Forget to V1 (….. ဖို့ မမေ့နဲ့နော်)
အင်္ဂလိပ်စာကို လွယ်လွယ်ကူကူ မှတ်မိစေဖို့ ၀ါကျ တူလေးတွေကို ဖတ်ရင်း အတတ်မြန်အောင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ You need to နဲ့ Verb 1 နဲ့ တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာလို ……. လုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပါတယ်။ နမူနာ ၀ါကျလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။
Posted in: Learning EnglishCommentbloggerak	 08/10/2017